Rehefa nahita ny famolavolana indroa indroa ao an-tranon'olona hafa aho, dia nialona ahy!
Home / Blog / Taorian'ny Nahitako Ilay Drafitra Doboka In-droa Tao An-tranon'olona Iray, dia Nialona aho!
Taorian'ny Nahitako Ilay Drafitra Doboka In-droa Tao An-tranon'olona Iray, dia Nialona aho!
2020 / 12 / 12 FisokajianaBlog 4717 0
Sekolin'ny fandraharahana ao amin'ny fandroana Ou Xiaowei
Vao maraina ary maika
Ny karazana fahasahiranana isan-karazany ~ ~~ rehefa manery amin'ny fanasana sy fikosehana nify.
Efa niaina an'ity karazana olana ity ve ianao?
Ny koveta fitobiana dia entana tsy maintsy ananana ao amin'ny trano fandroana, ary maro ny olona mihevitra fa tsy mila fasana iray fotsiny ho an'ny trano fidiany izy ireo. Ny famolavolana koveta roa sosona dia tsy sahaza ho an'ny toeram-panasan-damba ho an'ny daholobe amin'ny fivarotana lehibe.
Raha ny marina, ny kovetabe roa dia mitovy amin'ny fampiasana ao an-trano.
Olona roa no mila manasa miaraka amin'ny fotoana lava ary manosika eo alohan'ny fantsakana iray amin'ny fotoana iray. Tsy hoe manahirana fotsiny io fa tsy mandaitra ihany koa, ary ny fidinan'ny dobo roa sosona dia afaka misoroka an'io olana io. Ny koveta roa sosona dia tsy vitan'ny hoe mahomby kokoa, fa mety ho lamaody kokoa ihany koa.
Fantsona ambanin'ny tany: tsy misy toerana maty ary mora diovina
▲Safidin'ny kovetabe ambanin'ny kaontera, ambanin'ny filentehana. Ny tasy amin'ny rano amin'ny takelaka dia azo atsofoka ao anaty koveta, ka mahatonga ny fanadiovana ho mora kokoa. Ny kabinetra mihantona be eo ambonin'ilay lovia dia tsy olana amin'ny fametrahana ny fidiovana ao an-trano. Mora ny manadio miaraka amina kabinetra mihantona lehibe eo ambonin'ny lovia.
Tsara raha manana kabinetra fidiovana indroa ao amin'ny trano fidiovana. Afaka mifoha maraina ianao hiara-misasa, ary mankafy ny fotoana tantaram-pitiavana. Tsara raha manana fitaratra mba hamenoana mazava ny jiro ao an-trano mba tsy hanahirana anao ny manakana ny ilany iray amin'ny jiro.
Ny vondrona “Basin-droa + fitaratra boribory roa” dia tsara tarehy sy lamaody nefa tsy very ny fahatsapana ny rendrarendra. Ny kabinetra kely mihantona eo afovoan'ny fitaratra dia mety amin'ny fitehirizana ny nify sy ny borosy nify. Ny fitambaran'ny "Vatasarihana + varavarana misokatra + sideboard" dia ampiasaina eo ambanin'ny basin, izay afaka mamaly mora foana ny filan'ny fitehirizana entana lehibe sy kely ao amin'ny trano fidiovana.
Tavoahangy vato tokana: faran'izay kely indrindra
▲ Mafana ny vatolampy vatolampy, ary ny fampiasana fantsom-bato roa sosona vato hamoronana fomba hotely mihoa-pampana, fahatsapana fahafinaretana feno. Ireo takelaka vatolampy dia tsy vitan'ny avo lanja ihany fa avo lenta ihany koa. Miaraka amin'ny hamafin'ny 6 amin'ny refy hamafin'ny Mohs, dia tombony ny maharitra sy mahatohitra mafy.
▲Io no fomba tsara indrindra hitazonana ny fahatsapana minimalista sy mandroso. Izy io koa dia afaka mamaly ny filan'ny fitehirizana. Ny famolavolana semi-open dia manome toerana fitahirizana entana kely, ary ny famolavolana semi-open dia mifanaraka amin'ny filan'ny fampiasana avo sy ambany.
▲ Raha mila toerana fitahirizana bebe kokoa ianao, maninona tsy foronina ny a “Drawer + sideboard” fitehirizana fitehirizana ao ambanin'ny filatsahan'ny takelaka? Afaka mitahiry entana madinidinika ny vatasarihana. Ny vatasarihana dia azo ampiasaina hitahirizana entana madinidinika ary ny varavarana azo ampiasaina hitahirizana ny entam-pianakaviana. Izy io dia fitambarana tsara hanatsarana ny fampiasana ny habaka.
Fantsona Countertop: fomba maro ary mora soloina
▲ Ny lovia Countertop dia misy amin'ny fomba isan-karazany ary mora soloina. Safidy tsara ho an'ny olona maniry hisafidy fomba famolavolana hafa.
▲Tavoahangy fotsy manify roa manify miaraka amina kabinetra lacquered fotsy. Ny haben'ny fitambaran-kazo fitaratra dia lehibe, manamaivana ny tsindry fitehirizana ny fidiovana. Ny efitrano malalaka misokatra roa eo anelanelan'ny tavy roa ho an'ny fitehirizana lamba famaohana, mora ampiasaina amin'ny fanasana.
Siny kely ambany sy avo: mora hosasan'ny ankizy
Mety kokoa ny misafidy koveta ambony na ambany rehefa manan-janaka ao an-trano ianao. Tsara kokoa ho an'ny ankizy tsy ampy halavany ny mampiasa koveta ambany. Tena mety ho an'ny ankizy ny manasa mahaleo tena sy mampivelatra ny fahaizan'ny fikarakaran-tena.
▲Mamorona efitrano malalaka misokatra eo ambanin'ny tavy hametrahana kapa, izay mety amin'ny fandroana sy fanovana. Tsara raha manana fandroana tsara hampisarahana ny lena sy ny maina, raha tsy izany dia mora milentika sy mamorona endrika.
Raha te hametraka koveta roa ao an-trano ianao dia mila mitandrina amin'ireo.
▲ Ny trano fandroana dia mila manana tatatra roa sosona na haverina averina amin'ny tee.
▲ Ireo valizy telozoro amin'ny fantsom-pifandraisana rano mafana sy mangatsiaka dia tokony apetraka faran'izay haingana ary ampitaina amin'ny mpamorona mialoha.
▲ Hamarino tsara fa manana toerana malalaka eo anelanelan'ny lovia roa ianao.
▲ Ny tsara indrindra dia ny manamboatra jiro fitaratra roa hitehirizana hazavana ampy amin'ny lafiny roa.
▲ Mora ampiasaina izy io, ary ny haavon'ny countertop amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 600 ~ 680mm, izay mifanaraka amin'ny haavon'ny ankamaroan'ny olona.
Previous :: Mampiasa vera ny efitra fandroana hanavahana ny lena amin'ny maina, izay mamiratra sy malalaka Next: Miala tsiny fa manana ireo olana ireo ny trano fidiovana fa tsy olana amin'ny kalitao!
2021 / 01 / 11 1641
Azo havaozina ny trano fidiovana !!! Ny trano fandroana dia ho fantatry ny olona
2021 / 01 / 11 1911